RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii soo daahday ee ay kooxda Liverpool ka gaartay Everton ee Premier League – Gool FM
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii soo daahday ee ay kooxda Liverpool ka gaartay Everton ee Premier League
(Liverpool) 20 Dis 2016 – Liverpool ayaa soo degtay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, kaddib markii ay guul soo daahday dhammaadkii ciyaarta ka gaartay naadiga Everton oo ay booqatay.
Liverpool ayaa goolka madiga ah oo ay uga badisay kooxda ay ka wada dhisan yihiin magaalada Liverpool waxaa u dhaliyey daqiiqadihii lagu daray dhammaadkii ciyaarta Sadio Mane.
>- Kani waxa uu ahaa kulankii labaad Premier League xilli ciyaareedkan 2016-17 oo aan qeybta hore la samaynin hal shuut oo bartilmaameed toos ah, kaddib kulankii dhexmaray Swansea v Sunderland.
>- 27 daqiiqo ayey ku qaadatay kooxda Liverpool inay kubbad ku taabtaan xerada ganaaxa Everton intii lagu guda jiray kulankan.
>- Kani waxa uu ahaa kulankii 7-aad Premier League ee Merseyside derby oo la ciyaaro maalin Isniin ah, Everton ayaana guuldarreysatay hal kulan lixdii jeer ee hore.. (3 guul, 2 barbaro iyo 1 guuldarro).
>- Kooxda Liverpool guul darro lama kulmin 13-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay wajahday Everton tartammada oo dhan.
>- Everton ayaa kaliya hal jeer guul gaartay 19-kii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay Merseyside derbies ku wajahday Liverpool.. (1 Guul, 9 barbaro iyo 9 guuldarro).
>- Ka hor kulankan ay adkaatay Liverpool, afartii kulan ee horyaalka ugu dambeeyey oo ay labadan kooxood isku arkeen garoonka Goodison Park barbaro ayey ku kala tageen.
>- Kani waa kulanka casaanka ugu badan la bixiyey taariikhda Premier League, waxaa Everton iyo Liverpool kulankooda la bixiyey 21 kaarka guduudan, laakiin kulankan wax kaar cas ah lama bixinin.
>- Sadio Mane ayaa ku lug yeeshay 20 gool 24-kii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ciyaaray horyaalka Premier League, 16 gool waa uu dhaliyey halka 4 gool oo kale uu caawiye ka ahaa.
>- Tani waxa ay ka dhigan tahay in 13 ka mid ah 15-kii kulan ee ugu dambeeyey Premier League aan Liverpool la garaacin.
>- Liverpool ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay labo kulan oo xiriir ah oo ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda Premier League, tan iyo bishii August sanadkii 2015.
>- Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Everton Gareth Barry ayaa noqday laacibka labaad ee ugu safashada badan taariikhda horyaalka Premier League.
>- Everton ayaan ka adkaan kulan ay wajahday Liverpool tartan kasta tan iyo bishii October sanadkii 2010-kii, tan iyo markaas 13 kulan ayey guul la’aan yihiin.
Gareth Barry oo noqday xiddiga labaad ee ugu safashada badan taariikhda Premier League
Diego Costa oo ka dagay dalka Brazil